Ndị na - ahụ maka Intanet - Chọọchị Kraịst ... Ole ndị bụ ndị a?
Nzuko nke Kraist ... ndi bu ndi a?
Site na Joe R. Barnett
O nwere ike ịbụ na ị nụrụ banyere ụka dị iche iche nke Kraịst. Ma eleghị anya, ị jụọ, "ndị bụ ndị a? Gịnị - ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla - na - eme ka ha dị iche iche site n'ọtụtụ narị chọọchị ndị ọzọ n'ụwa?
O nwere ike ịbụ na i chere, sị:
"Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme ha?"
"Mmadụ ole ka ha nwere?"
"Gịnị bụ ozi ha?"
"Olee otú e si achị ha?"
"Olee otú ha si efe ofufe?"
"Gịnị ka ha kweere banyere Bible?
Ole ndi mmadu di?
N'ụwa nile enwere ọgbakọ 20,000 dị iche iche nke ụka dị iche iche nke Kraịst na ngụkọta nke 21 / 2 gaa na mmadụ 3 nde otu. E nwere obere ọgbakọ, nke na-agụnye nanị ndị ole na ole - na nnukwu ndị mejupụtara puku mmadụ ole na ole.
Ike kachasi ike n'ime ụka nke Kraịst bụ na ndịda United States ebe, dịka ọmụmaatụ, e nwere ihe gbasara ndị 40,000 nọ na ọgbakọ 135 dị na Nashville, Tennessee. Ma ọ bụ, na Dallas, Texas, ebe ihe dị ka ndị 36,000 nọ na 69 ọgbakọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ dịka Tennessee, Texas, Oklahoma, Alabama, Kentucky - na ndị ọzọ - enwere ụka nke Kraist na obodo ọ bụla, n'agbanyeghị ma ọ bụ nnukwu ma ọ bụ obere.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke ọgbakọ na ndị òtù adịghị ọtụtụ na ebe ndị ọzọ, e nwere ụka nke Kraịst na obodo ọ bụla na United States na na 109 mba ndị ọzọ.
Mweghachi nke Mweghachi
Ndị òtù ụka nke Kraịst bụ ndị mmụọ mweghachi - na-achọ ịmeghachi n'oge anyị oge mbụ nke ụka Agba Ọhụrụ.
Dr. Hans Kung, bụ ọkà mmụta okpukpe Europe a maara nke ọma, bipụtara akwụkwọ afọ ole na ole gara aga, aha ya bụ Chọọchị. Dr. Kung na-akwa arịrị na eziokwu ahụ bụ na ụlọ ụka ahụ emezighị emezi; aghọọla ihe ọdịnala jọrọ njọ; enweghi ike ibu ihe Kraist zubere na o kwesiri ibu.
Nanị azịza ya, dị ka Dr. Kung si kwuo, bụ ịlaghachi na akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji hụ ihe ụka dị na mmalite ya, ma weghachite na narị afọ nke iri abụọ ihe dị mkpa nke ụka mbụ ahụ. Nke a bụ ihe ụka nke Kraịst na-achọ ime.
Na njedebe nke narị afọ 18th, ndị mmadụ nke ụka dị iche iche, na-amụ ihe n'otu n'otu, n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, malitere ịjụ, sị:
-N'ihi gịnị ka ị ga-eji laghachi n'okpukpe karịrị ịdị mfe na ịdị ọcha nke ụka nke narị afọ mbụ?
-N'ihi gini ka ị ga - ejideghị naanị Akwụkwọ Nsọ ma nọgide n'ihu "na - eguzosi ike n'ihe ozizi ndịozi ..." (Ọrụ 2: 42)?
-Gịnị mere na ị dịghị akụ otu mkpụrụ (Okwu Chineke, Luk 8: 11), Ndị Kraịst narị afọ mbụ kụrụ, ma bụrụ Ndị Kraịst, dịka ha dị?
Ha na-arịọ onye ọ bụla ka ọ tụfuo nkwenkwe okpukpe, iji tụfuo nkwenye mmadụ, na ịgbaso nanị Bible.
Ha kụziri na ọ dịghị ihe ọ bụla a ga-achọ n'aka ndị mmadụ dị ka ọrụ okwukwe ma e wezụga nke ahụ pụtara ìhè na Akwụkwọ Nsọ.
Ha kwusiri ike na ịlaghachi na Bible apụtaghị ịtọ ntọala ọzọ, kama ọ bụ ịlaghachi na chọọchị mbụ.
Ndị ụka nke Kraịst nwere ịnụ ọkụ n'obi banyere ụzọ a. Site na Baibul dị ka onye nduzi anyị naanị anyị na-achọ ịchọta ihe chọọchị mbụ ahụ dị ma weghachi ya kpọmkwem.
Anyị anaghị ahụ nke a dị ka mpako, mana nke ahụ dị iche. Anyị na-azọpụta na anyị enweghị ikike ịjụ maka nkwado ụmụ nwoke na nzukọ mmadụ - mana ọ bụ ikike ịkpọ ndị ikom ka ha soro ụkpụrụ Chineke.
Ọ bụghị Mkpesa
N'ihi nke a, anyị enweghị mmasị na nkwenye ndị mmadụ mere, mana naanị na agba ohu ọhụrụ. Anyị adịghị eche na onwe anyị dị ka ụka - ọ bụghị dị ka Katọlik, ndị Protestant, ma ọ bụ ndị Juu - kama dịka ndị òtù ụka nke Jizọs guzobere na nke ọ nwụrụ.
Na, na mberede, ọ bụ ya mere anyị ji etinye aha ya. A naghị eji okwu bụ "chọọchị nke Kraịst" mee ihe dị ka nkọwa aha ya, kama dị ka nkọwa nke na-egosi na chọọchị ahụ bụ nke Kraịst.
Anyị maara njirimara nke onwe anyị na adịghị ike anyị - nke a bụ ihe ọzọ mere ịchọrọ iji nlezianya na-agbaso atụmatụ zuru ezu na zuru oke nke Chineke nwere maka ụka.
Ịdị n'otu nke dabeere na Bible
Ebe ọ bụ na Chineke etinyewo "ikike niile" n'ime Kraịst (Matiu 28: 18), ebe ọ bụ ọnụ na-ekwuru Chineke taa (Hibru 1: 1,2), anyị kwenyesiri ike na ọ bụ nanị Christ nwere ike ikwu ihe ụka dị na ihe anyị kwesịrị ịkụziri.
Ebe ọ bụkwa na Agba Ọhụụ na-akọwa ntụziaka Kraịst nye ndị na-eso ụzọ ya, naanị ya ga-abụrịrị ihe ndabere maka nkuzi na omume okpukpe niile. Nke a bụ isi na ndị ụka nke Kraịst. Anyị kwenyere na ịkụzi Agba Ọhụrụ n'enweghị mgbanwe bụ nanị ụzọ isi edu ndị ikom na ndị inyom ịghọ Ndị Kraịst.
Anyị kwenyere na nkewa okpukpe dị njọ. Jizọs kpere ekpere maka ịdị n'otu (John 17). N'ikpeazụ, Pọl onyeozi rịọrọ ndị ekewawara ka ha dịrị n'otu na Kraịst (1 Corinthians 1).
Anyị kwenyere na naanị otu ụzọ isi nweta ịdị n'otu bụ site n'ịlọghachi na Bible. Nkwenye enweghị ike iweta ịdị n'otu. N'ezie, ọ dịghị mmadụ, ma ọ bụ ìgwè mmadụ, nwere ikike ịmepụta usoro iwu nke onye ọ bụla ga-agbaso. Ma, ọ bụ nnọọ mma ịsị, "Ka anyị dịrị n'otu site na ịgbaso Akwụkwọ Nsọ." Nke a dị mma. Nke a dị mma. Nke a ziri ezi.
Ya mere, ụka nke Kraist na-ekpe ekpere maka ịdị n'otu okpukpe nke dabeere na Bible. Anyị kwenyere na ịdenye aha ọ bụla ọzọ karịa Agba Ọhụrụ, ịjụ irube isi n'iwu ọhụụ ọ bụla, ma ọ bụ ịgbaso ụdị ọ bụla Agba Ọhụụ na-akwadoghị bụ ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ ya na nkuzi nke Chineke. Na ntinye na ntinye ihe ndi ozo bu ndi a mara na Baibul (Ndi Galetia 1: 6-9, Nkpughe 22: 18,19).
Nke a bụ ihe mere Agba Ọhụụ ji bụrụ nanị ọchịchị nke okwukwe na omume anyị nwere na chọọchị Kraist.
Ọgbakọ Ọ bụla Na-achịkwa Onwe Ya
Nzukọ nke Kraist enweghi ihe ọ bụla nke nhazi nke nzukọ nke oge a. Enweghị mpempe akwụkwọ na-achịkwa - ọ bụghị mpaghara, mpaghara, mba ma ọ bụ mba - enweghị isi ụlọ ọrụ ụwa na enweghị nzukọ ọ bụla.
Ọgbakọ ọ bụla kwadoro onwe ya (na-achịkwa onwe ya) ma na-anọpụ iche n'ọgbakọ ọ bụla ọzọ. Nanị njikọ nke na-ejikọta ọtụtụ ọgbakọ ọnụ bụ nkwado zuru oke nye Kraịst na Akwụkwọ Nsọ.
Enweghị mgbakọ, nzukọ ọ bụla, ma ọ bụ akwụkwọ akwụkwọ. Ọgbakọ dị iche iche na-akwado nkwado ụlọ obibi, ụlọ maka ndị agadi, ọrụ ozi, wdg. Otú ọ dị, òkè na-enye afọ ofufo kpam kpam n'akụkụ ọgbakọ ọ bụla na enweghị nkwekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nke otu isiokwu ma ọ bụ mee mkpebi maka ọgbakọ ndị ọzọ.
Ọgbakọ ọ bụla na-achịkwa mpaghara site n'aka ọtụtụ ndị okenye ndị a họpụtara n'etiti ndị òtù. Ndị a bụ ndị ikom ruru eru maka ọrụ a maka 1 Timothy 3 na Titus 1.
E nwekwara ndị diakọn na ọgbakọ ọ bụla. Ndị a aghaghị izute Akwụkwọ Nsọ nke 1 Timoti 3. M
Ofufe na ụka nke Kraist hiwere isi n'ihe ise, otu ihe ahụ na chọọchị narị afọ mbụ. Anyị kwenyere na ụkpụrụ ahụ dị mkpa. Jisos siri, "Chineke bu mo, ndi n'ekpere ya gha agha ofufe nime mo na eziokwu" (John 4: 24). Site na nkwupụta a anyị na-amụta ihe atọ:
1) A ghaghi ichota ofufe ayi nye ihe ziri ezi ... Chineke;
2) Ọ bụ mmụọ ziri ezi kwesịrị ịkpali ya;
3) Ọ ghaghị ịdị ka eziokwu.
Ife Chineke ofufe dika eziokwu si di bu ife ya dika Okwu ya si di, n'ihi na Okwu ya bu eziokwu (John 17: 17). Ya mere, anyi aghaghi ikpochapu ihe obula chotara n'ime Okwu ya, anyi aghagh i agunye ihe obula a na-achọtaghi n'ime Okwu ya.
N'ihe banyere okpukpe, anyị ga-eje ije n'okwukwe (2 Corinthians 5: 7). Ebe ọ bụ na okwukwe na-abịa site n'ịnụ Okwu nke Chineke (Ndị Rom 10: 17), ihe ọ bụla ọbụla Akwụkwọ Nsọ nyere ikike apụghị ime site n'okwukwe ... na ihe ọbụla abụghị nke okwukwe bụ mmehie (Ndị Rom 14: 23).
Ihe ise nke ofufe nke ụka nke narị afọ mbụ hụrụ na-abụ abụ, ikpe ekpere, ikwusa ozi ọma, inye onyinye, na iri nri anyasị nke Onyenwe anyị.
Ọ bụrụ na ị maara ụka nke Kraịst, ị maara na na abụọ n'ime ihe ndị a, omume anyị dị iche na nke ọtụtụ òtù okpukpe. Ya mere, kwe ka m lekwasị anya na abụọ ndị a, ma kwuo ihe kpatara anyị maka ihe anyị na-eme.
Otu n'ime ihe ndị mmadụ na-achọkarị banyere ụka nke Kraịst bụ na anyị na-abụ abụ n'ejighị iji ngwá egwú egwu egwu - abụ abụ cappella bụ nanị egwú e ji mee ihe na ofufe anyị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ebe a bụ ihe kpatara ya: anyị na-achọ ife ofufe dịka ntụziaka nke Agba Ọhụụ. Agba ohu n'eme ka egwu di egwu, ya mere, anyi kwenyere na o kwesiri ka o wepuo ya. Ọ bụrụ na anyị ejiri ngwá ọrụ anyị ga-eme ya n'emeghị ikike nke Agba Ọhụrụ.
E nwere naanị amaokwu 8 na Agba Ọhụụ n'ihe gbasara egwu na ofufe. Lee ha bụ:
"Ma mgbe ha bụrụ abụ, ha gawara n'Ugwu Oliv" (Matthew 26: 30).
"n'etiti abalị Pọl na Saịlas na-ekpe ekpere ma na-abụku Chineke abụ otuto ..." (Ọrụ 16: 25).
"Ya mere, mgekele gị n'etiti ndị mba ọzọ, ma bụrụku aha gị" (Ndị Rom 15: 9).
"... M ga-eji mmụọ m na-abụ abụ, m ga-ejikwa obi m bụrụ abụ" (1 Corinthians 14: 15).
"... juputa na Mo Nso, na-agwa ibe unu okwu n'abuo na ukwe na n'abu nke ime mmuo, na-abia ma jiri obi unu nile mekuo Onyenwe anyi ekele" (Ndi Efesọs 5: 18,19).
"Ka okwu Kraist biri nime unu n'uba nke ukwuu, ka unu na-ezi ma na-adụ ibe unu ọdụ n'amamihe nile, na ka unu na-abụ abụ na abụ otuto nke mmụọ nime obi unu nye Chineke" (Ndị Kọlọsi 3: 16).
"M ga-ekwuputa aha gị nye ụmụnne m, n'ime ụka ka m ga-abụku gị abụ otuto" (Hibru 2: 12).
"Onye o bula n'ime unu na-ata ahuhu? Ka o kpere ekpere, onye obula n'eme obi uto?" (James 5: 13).
Egwú egwu nke a na-adịghị ahụ anya na amaokwu ndị a.
Kemgbe ụwa, ọhụụ mbụ nke egwu egwu na-adịghị na ya ruo na narị afọ nke isii AD, ọ dịghịkwa onye ọ bụla na-eme ya ruo mgbe narị afọ nke asatọ gasịrị.
Ndị isi okpukpe dịka John Calvin, John Wesley na Charles Spurgeon kwadoro egwu egwu dị egwu n'ihi enweghịzi Agba Ọhụụ.
Idebe Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị kwa izu
Ebe ọzọ ị nwere ike ịhụ ọdịiche dị n'etiti ụka nke Kraịst na òtù okpukpe ndị ọzọ bụ na Nri Anyasị nke Onyenwe anyị. Nri ememe ncheta a ka Jizọs malitere n'abalị nke ịrara ya nye (Matthew 26: 26-28). Ndị Kraịst na - ahụ maka ọnwụ Onyenwe anyị (1 Corinthians 11: 24,25). Ihe nnọchianya - achicha na-ekoghị eko na mkpụrụ nke osisi vaịn - na-anọchite anya ahụ na ọbara Jizọs (1 Corinthians 10: 16).
Nzukọ Kraist dị iche na ọtụtụ ndị na anyị na-ahụ Nri Anyasị nke Onyenwe anyị n'ụbọchị mbụ n'izu ọ bụla. Ọzọ, ihe mere anyị ji kpebisie ike ịgbaso nkuzi nke Agba Ọhụụ. Ọ na-ekwu, na-akọwa omume chọọchị nke narị afọ mbụ, "N'ụbọchị mbụ nke izu ... ndị na-eso ụzọ zukọtara ịkụcha achịcha ..." (Ọrụ 20: 7).
Ụfọdụ ekwetaghị na ederede ekwughị ụbọchị mbụ n'izu ọ bụla. Nke a bụ eziokwu - dịka iwu nke idebe Ụbọchị Izu Ike ezughị ụbọchị izu ike ọ bụla. Iwu ahụ bụ nanị, "cheta ụbọchị izu ike iji mee ka ọ dị nsọ" (Ọpụpụ 20: 8). Ndị Juu ghọtara na ịpụta ụbọchị izu ike ọ bụla. Ọ dị anyị ka site n'otu echiche ahụ "ụbọchị mbụ n'izu" pụtara ụbọchị mbụ n'izu ọ bụla.
Ọzọ, anyị maara site na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme dị otú ahụ a ma ama dịka Neander na Eusebius na Ndị Kraịst na narị afọ ndị mbụ were nri anyasị nke Onyenwe anyị na Sunday ọ bụla.
Okwu nke Otu
Ikekwe ị na-eche, sị, "Olee otu mmadụ si aghọ onye ụka nke Kraịst?" Kedu usoro okwu nke otu?
Chọọchị Kraịst ekwughị na ị ga-agbaso usoro ụfọdụ nke a ga-agbaso maka ịnakwere nkwado na chọọchị. Agba ohu na-enye ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-ewere n'ụbọchị ahụ ịghọ Ndị Kraịst. Mgbe mmadụ ghọrọ Onye Kraịst, ọ na-anọchite anya ụka na-akpaghị aka.
Otú ahụ ka ọ dịkwa banyere ụka nke Kraịst taa. Enweghi usoro di iche iche nke iwu ma obu ememe ndi mmadu kwesiri igbaso ka ha abanye n'ime uka. Mgbe mmadụ na-aghọ Onye Kraịst ọ, n'otu oge ahụ, na-aghọ onye òtù ụka. Enweghị ihe ndị ọzọ a chọrọ iji ruo eru maka ndị ụka.
N'ụbọchị mbụ nke ụka, ndị a chegharịrị ma bụrụ ndị e mere baptism (Ọrụ 2: 38). Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, a gbakwunyere ndị niile a zọpụtara na chọọchị (Ọrụ 2: 47). Dị ka amaokwu a si kwuo (Ọrụ 2: 47) ọ bụ Chineke mere ntinye. Ya mere, na ịchọrọ ịgbaso ụkpụrụ a, anyị anaghị akpọ ndị mmadụ na chọọchị ma ọ bụ na-amanye ha site na usoro ọmụmụ dị mkpa. Anyị enweghị ikike ịjụ ihe ọ bụla karịrị nrubeisi ha na-erubere Onye Nzọpụta.
Ọnọdụ nke mgbaghara nke a na-akụzi na Agba Ọhụụ bụ:
1) Otu ga-anụ ozioma, n'ihi na "okwukwe na-abịa site n'ịnụ okwu Chineke" (Ndị Rom 10: 17).
2) Otu aghaghi ikwere, n'ihi na "n'enweghị okwukwe, ọ gaghị ekwe omume ime ihe na-atọ Chineke ụtọ" (Hibru 11: 6).
3) Onye aghaghi icheghari nmehie nile gara aga, n'ihi na Chineke "nyere mmadu nile iwu, ebe obula icheghari" (Olu 17: 30).
4) Onye aghakwuputa Jisos dika Onyenwe ayi, n'ihi na o siri, "Onye n'ekwuputa m n'iru madu, ya ka m'gēkwuputa kwa n'iru nna m nke bi n'elu igwe" (Matthew 10: 32).
5) Na onye aghaghi ime baptism maka mgbaghara mmehie, n'ihi na Pita kwuru, "Chegharịanụ, ka e meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara mmehie gị ..." (Ọrụ 2: 38) .
Na-emesi ike na Baptizim
Nzukọ nke Kraist nwere aha ọma maka itinye nchegbu dị ukwuu maka mkpa ọ dị baptism. Otú ọ dị, anyị anaghị emesi baptism dịka "iwu chọọchị," mana dịka iwu nke Kraịst. Agba Ọhụụ na-akụzi baptism dịka ihe omume dị mkpa maka nzọpụta (Mark 16: 16; Ọrụ 2: 38; Ọrụ 22: 16).
Anyị adịghị eme baptizim nke nwa ọhụrụ n'ihi na baptism nke Agba Ọhụrụ bụ maka ndị mmehie na-atụgharịkwuru Onyenwe anyị na nkwenkwe na ezi uche. Nwa ọhụrụ enweghị mmehie ọ ga-echegharị, ọ gaghịkwa eru eru dịka onye kwere ekwe.
Nanị ụdị baptism anyị na-eme na chọọchị Kraist bụ nmikpu. Okwu Grik nke okwu baptism ahu biara bu "igbanye, imikpu, ime ihe, ijide." Na Akwụkwọ Nsọ na-ezo aka na baptism dị ka olili (Ọrụ 8: 35-39; Ndị Rom 6: 3,4; Ndị Kọlọsi 2: 12).
Baptizim dị oke mkpa n'ihi na Agba Ọhụụ setịpụrụ ihe ndị na-esonụ maka ya:
1) Ọ bụ ịbanye n'alaeze (John 3: 5).
2) Ọ bụ ịkpọtụrụ ọbara Kraịst (Ndị Rom 6: 3,4).
3) Ọ bụ ịbanye n'ime Kraịst (Ndị Galetia 3: 27).
4) Ọ bụ maka nzọpụta (Mark 16: 16; 1 Peter 3: 21).
5) Ọ bụ maka mgbaghara mmehie (Ọrụ 2: 38).
6) Ọ bụ ịsachapụ mmehie (Ọrụ 22: 16).
7) Ọ bụ ịbanye n'ime ụka (1 Corinthians 12: 13; Ndị Efesọs 1: 23).
Ebe ọ bụ na Kraịst nwụrụ maka mmehie nke ụwa dum, ọkpụkpọ òkù ịketa òkè na amara nzọpụta ya bụ oghe nye onye ọ bụla (Ọrụ 10: 34,35; Ngosipụta 22: 17), anyị ekwenyeghị na onye ọ bụla kpebiri maka nzọpụta ma ọ bụ ikpe. Ụfọdụ ga-ahọrọ ịbịakwute Kraịst na okwukwe na nrubeisi ma a ga-azọpụta ha. Ndị ọzọ ga-ajụ arịrịọ ya wee maa ha ikpe (Mark 16: 16). Ndị a agaghị efu n'ihi na akara ha maka ikpe, ma n'ihi na ọ bụ ụzọ ahụ ha họọrọ.
N'ebe ọ bụla ị nọ n'oge a, anyị nwere olileanya na ị ga-ekpebi ịnakwere nzọpụta Kraịst nyere - na ị ga-enye onwe gị n 'okwukwe na-erube isi ma ghọọ onye òtù ụka ya.